Sirdoonka Al Shabaab waxay u shaqeeyaan sida "Jinka" - BBC News Somali
Waxay tiri, markii aan kasoo laabtay dalka Soomaaliya, waxaa isoo wacay xubno ka tirsan Al-Shabaab, markii aan durbadiiba soo gaaray dalka Ingiriiska. Waxay isoo waceen ka hor inta aysan isoo wicin qoyskeyga oo aysan igu oran 'nabad maku timid', xilli aan sugayay gaari si uu guriga ii geeyo.
"Waxaa gaartay xarun bangi, nasiib darro waa uu xirnaa, waxaad garaacday albaabka xaruntaas, waxaad isku dayday in aad iska furto, halkaas waxaad isaga qaaday sawirro," waxaa sidaas ku yiri xubin ka tirsan ururka Al Shabaab.
Image caption Magaalada Muqdisho waxaa kasoo kabsaneysaa dhibaatada u geysteen dagaallada
"Ilaaladii ku waardiyeyneysay ma lahayn wax xirfad ah, way iska sheekeysanayeen, xilli ay qoryaha ku siteen garbahooda intii ay sugi lahaayeen ammaankaaga," ayay ku yiraahdeen Al Shabaab.
"Waxay igu yiraahdeen waxbo ha ka welwelin dhacdooyinkaas qaar ee dhaca mararka qaar oo dhibaato kuu horseedi karo," ayay tiri Mary Harper.
"Al Shabaab meel kasta ayay joogaan"
Image caption Al Shabaab waxay qortaan dagaalyahano da' yar
"Al-Shabaab sida Jinka ayay wax kasta u ogyihiin", waxaa sidaas yiri wiil dhallinyaro ah oo ay doonayeen inay tallaabo ka qaadaan ururka kaddib markii uu qalab uu kamid yahay qaboojiye ka iibiyay shaqaalaha Qaramada Midoobey iyo xubno ka tirsan ciidammada AMISOM oo ay dhammaantood u arkaan cadow.
Nin kale oo kasoo baxsaday Al-Shabaab ayaa sheegay in maalin ay soo weceen xubno ka tirsan ururka oo ay u sheegeen "waddada uu marayay xilliggaas iyo midibka dharkii uu xirnaa".
"Laanta Amniyaat-ka waa xidada ururka uu ku nool yahay, waana awoodda ugu weyn, haddii Amniyaatka la burburiyo, waxaa meesha ka baxaya jiritaanka Al Shabaab," ayuu yiri Xuseen Sheekh Cali, oo ahaan jiray la taliyihii amniga ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna agaasimaha machadka Hiraal oo uu fadhigiisu yahay Muqdisho.
"Waxay ka howlgalaan deegaanada cadawga"
Image caption Ciidammada Soomaaliya waxay maamulaan deegaanno yar oo ka tirsan dalka
"Waxaa loogu talagalay inay ka howlgalaan deegaannada ay u arkaan inay ku nool yihiin dadka cadawga ku ah, waxay inta badan wakhtigooda ku dhameystaan dhulka dowladda," ayuu yiri Maxamed.
Saameynta ka dhalatay cuna qabateynta Al-Shabaab ay saartay Marka
"Al Shabaab marar badan ayay isoo waceen, waxaan isku dayay inaan ku dhex dhuunto magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho iyo Baydhabo balse waxaan ka cabsanayaa inay iqabtaan, waxaan ku badbaadi karaa aan aado goobo ammaan ah, sida Yurub ama dalalka Khaliijka," waxaa sidaasi yiri nin horey uga tirsanaa Al Shabaab.
"Waa sida booliskii qarsoodiga u howlgeli jiray ee heystay fikradaha iyo mabaadii'da Midowgii Soviet ee leh awoodda ballaaran, sameeyana howlgallo madaxbannaan," ayuu yiri Richard Barrett.